Aaway Dukaanleyda ku bixineysa Doollarkooda Xayeysiinta? | Martech Zone
Aaway Dukaanleyda ku bixineysa Doollarkooda Xayeysiinta?
Arbacada, Oktoobar 19, 2016 Khamiista, Oktoobar 20, 2016 Douglas Karr
Waxay u muuqataa in isbeddelo xoog leh ay ka socdaan tafaariiqda maaddaama ay ku saabsan tahay xayeysiinta. Teknolojiyadaha dhijitaalka ah waxay bixiyaan fursado la qiyaasi karo oo keenaya natiijooyin waaweyn - tafaariiqlayaashuna fiiro gaar ah ayey u leeyihiin. Si qaldan uma turjumi doono natiijooyinkaan anigoo u maleynaya inay yihiin dhaqan ka soo horjeedka suuq geynta dijitaalka. Waa arrin casriyeysan. Xayeysiinta telefishanka, tusaale ahaan, waxay ku sii kordheysaa awooddeeda bartilmaameedsiga daawadayaasha iyadoo lagu saleynayo gobolka, dabeecadda, iyo waqtiga.
Maskaxda waxqabadka ayaa hadheeyay suuqleyda tafaariiqda hadda. Waxaan aragnaa kororka ugu weyn ee la beegsan karo, isla markiiba, xayeysiinta khadka tooska ah natiijada. Randy Cohen, madaxweynaha Fikradaha xayeysiiyaha
Khibradda dhijitaalka ah ayaa sidoo kale kor u qaadeysa waayo-aragnimada tafaariiqda, sida dhowaan lagu sii daayay Warbixinta Warshadaha Tafaariiqda ee InMoment ee 2016. Waxaa laga yaabaa in kharashaadka xayeysiinta qaarkood loo wareejiyo khibrada macaamiisha ee internetka. Natiijooyinka waxaa ka mid ah:
Macaamiisha ayaa kharash gareeya laba jeer ka badan dukaanka ku jira marka uu caawiyo xubin shaqaale ah
Kharashka macaamiisha 2.2 jeer dheeraad ah markay booqdaan websaydhka astaanta inta ay ku jiraan dukaanka
Kharashka macaamiisha ayaa kordha afar jeer marka dadka wax iibsanaya ay ku hawlan yihiin labada shaqaale iyo websaydhka magaca. Markasta oo kaalmada badan ee macaamilku helo, mid dijitaal ah ama mid bani'aadam ah, ayuu isagu ama iyaduba diyaar u yihiin inay kharash gareeyaan.
Markii aan arkay hoos u dhaca ku yimid kharashka suuqgeynta iimaylka ayaa iga yaabiyey haddii qarashyada suuqgeynta iimaylka ay hoos u dhaceen ama jaadka marinnada uu ballaadhay, taas oo keentay in miisaaniyadaha la jaangooyey laga wareejiyo emaylka loona beddelo kanaalada kale ee u baahan fiiro gaar ah. Suuqgeynta iimaylku waa aasaaska istiraatiijiyad kasta oo tafaariiqeed ama ganacsi ah, sidaa darteed waxaan rajeynayaa in tafaariiqleydu aysan dhab ahaan yareyn dadaalladooda suuqgeynta iimaylka.
Mid ka mid ah su'aalaha xiisaha badan, fekerkeyga, wuxuu ahaa in dukaamada tafaariiqda ay tahay in la isticmaalo ama tafaariiqda tafaariiqda. Jawaabtu waxay ahayd mid aad u xun. Tani waxay dhab ahaan tilmaami kartaa arrin kale, awoodda hay'adaha si ay ula socdaan tiknoolajiyada iyo isbeddelada macaamiisha. Hay'ado badan ayaa bilaabay inay ku takhasusaan xogta weyn, warbaahinta bulshada, waayo-aragnimada moobiilka, omnichannel, iyo warbaahinta dhijitaalka ah ee riixaya safka hore ee suuq-geynta - kana baxsan warshadaha tafaariiqda.
Waa tan faahfaahinta ka timid AdWeek, Xayeysiiyaasha Tafaariiqda Ayaa Hore U Muuqda:
Tags: advertisingadweekwarbaahincabletafaariiqdaxayeysiinta tafaariiqdatelevision
Pipedrive: U-muuqashada Dhuunta Iibkaaga